Global Voices teny Malagasy » Taiwan: Tsy misy tanàna ho an’ny Aborigènes antitra · Global Voices teny Malagasy » Print
Nivoaka ny 12 Marsa 2008 13:53 GMT 1	 · Mpanoratra avylavitra
Sokajy: Taiwan (ROC), Fampandrosoana, Fanoherana, Fifidianana, Hafanàm-po nomerika, Teratany, Tontolo_iainana, Zon'olombelona
Miteraka resabe na ny endrika na ny fomba nitondrana ity adihevitra ity, na izany aza anefa, nisy ampahany nahatsikaiky sy nifanohitra amin’ny trangan-javatra hafa niseho tao. Raha mbola variana niady hevitra ireo mpilatsaka hofidiana tao an-trano, , tany ivelany kosa, maro ireo vondron’olona izay nahitàna koa vondron’ny aborigènes miisa roa nifandahatra amin’ny mpitandro ny filaminana (police) ; rehefa niala tsiny (nibaboka) tamin’ireo aborigènes noho ny fanambaràny miaro fanavakavahana ara-poko i Ma Yin-jeou , mpilatsaka avy amin’ny KMT ary koa rehefa nilaza i Frank Chang-ting Hsieh , mpilatsaka avy amin’ny DPP fa misy rà aborigène mikoriana ao anatiny, dia nahatsiaro ho toy ny nanaovana sinto-mahery ary feno ahiahy momba ny tenany sy ny azy ireo vondron’olona aborigènes nanao fanoherana tao ivelan’ny trano.
Lahy antitra iray mitomany eo anatin’ny” tranony”… taorian’ny fandravàna Taipei Times nitatitra ny zava-nisy avy teny an-toerana :
Ireo mpiblaogy sy mpampahalala vaovao malalaka dia samy teo nanatrika ny fizotr’ireto bulldozers sy grues ireto izay narovan’ny mpotandro filaminana (polisy) 70 mahery. Torrent sy ireo mpampahalala vaovao malalaka avy amin’ny Coolloud(zh) dia samy nandefa antso maika ho filàna vonjy :
Ny governemantan’ny faritry Taipei dia nanolotra tranom-panjakana ho an-na sokajin’olona voafetra tanaty rejistra sy ireo nanaiky nanao sonia « ny fisintahana » amin’ny fonenany. Ny tany sy ny havoana nonenan’ireto aborigènes ireto moa dia nalain’ny Birao mitantana ny Ala sy Taiwan Sucre Corporation. Voatery niala noho izany izy ireo, nafindra miaraka ho amin’ny toerana iray, ary dia nafoin’izy ireo ankehitriny ny hany tany kely teo ampelatanany. Mpiblaogy maro sy mpampahalala vaovao malalaka dia namorona blaogy fanentanana mitondra ny lohateny hoe “Supporters for Sanying Aboriginal Community ” (Fanohanana ny vondron’olona aborigènes ao Sanying) mba hamondronana ireo rehetra mety ho tatitra na vaovao mifandraika amin’ny zon’i Sanying taorian’iny tranga iny. Mampiasa ny fitaovan-tserasera toy ny Google Map sy sarimihetsika Youtube izy ireo amin’izany mba hampahafantarana ny mpampiasa internet hoe aiza no misy ity vondron’olona ao Sanying ity sy ny faniriana lalina ananan’ireo aborigènes ireo mba hisy sy hiaina.
Ny fahitalavitra Taiwan Indigenous TV (izay tantanàn’ny tsy miankina) dia nitatitra koa ity tranga ity :
koa dia nanadihady mponina Amis iray , Banai,:
Superbird kosa namakafaka ny fiainana atrehin’ireo  Amis ao anatin’ny vondron-piaraha-monina aborigènes Sanying:
Lisitry ny zavatra sy fitaovana iantohan’ny vondrona mpiahy ara-tsosialy sy ireo tsara sitrapo. Miara-miasa ireo tsara sitrapo eny anivon’ny fiaraha-monina sy ny tanaty Cyber mba hanapariaka ny antso vonjy sy ho fanampiana amin’ny fananganana indray ireo trano avy amin’ny faharavàna. Ankilany anefa, toa tsy ho azo antoka mihitsy ny raharaha hatramin’ny nahenoana ny olom-panjakana nilaza fa hiverina ry zareo hamarana « ny asany » 28 Feb, the Peace Memorial Day .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2008/03/12/656/
 Ma Yin-jeou: http://en.wikipedia.org/wiki/Ma_Ying-jeou
 Frank Chang-ting Hsieh: http://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Hsieh
 nitatitra ny zava-nisy avy teny an-toerana: http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2008/02/23/2003402475
 nandefa antso maika ho filàna vonjy: http://www.coolloud.org.tw/node/16653
 Supporters for Sanying Aboriginal Community: http://support-sanying.blogspot.com/
 tatitra an-tsarimihetsika : http://www.peopo.org/portal.php?op=viewPost&articleId=12756
 dia nitatitra koa ity tranga ity: http://shijou.blogspot.com/2008/02/blog-post_18.html
 koa dia nanadihady mponina Amis iray: http://www.coolloud.org.tw/node/16620
 kosa namakafaka ny fiainana atrehin’ireo: http://blog.yam.com/superbird/article/13886578
 28 Feb, the Peace Memorial Day: http://www.gio.gov.tw/info/festival_c/228_e/228_e.htm